ကြက်ဥ ၊ ဘဲဥ နှင့် ဥအမျိုးမျိုးတွေကို ဘာကြောင့် ကျက်အောင် ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်ပြီးမှ စားသင့်သလဲ? – BurmeseHearts
ကြက်ဥ ၊ ဘဲဥ နှင့် ဥအမျိုးမျိုးတွေကို ဘာကြောင့် ကျက်အောင် ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်ပြီးမှ စားသင့်သလဲ?
ကိုရီးယားနဲ့ ဂျပန်ရိုးရာအစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ ထမင်းလိပ်ကို ဘာကြောင့် ရှောင်သင့်သလဲ?